Amaphutha ajwayelekile enziwa 'ngezintshebe zezinsuku ezintathu' | Amadoda aSitayela
'Intshebe yezinsuku ezintathu' ingenye yezitayela ezithandwa kakhulu. Futhi akumangalisi. Esinye sezizathu ezisemqoka ukuthi ithanda iningi lamadoda, yize kungafanele ikhohlwe ukuthi kulula ukuyigcina nokuba nezinwele zobuso obukhulu obukhulu akuyona imfuneko yokuthi isebenze, njengoba kunjalo ngezintshebe ezinde.
Yize izinzuzo zikudlula kude ukungalungi, akulimazi ukunaka labo abancane. imininingwane engenza 'intshebe yakho yezinsuku ezintathu' ingabukeki ingenaphutha ngangokunokwenzeka. Lawa ngamanye amaphutha odinga ukuwagwema:
1 Ukuyigqoka mfushane kakhulu noma yinde kakhulu
2 Ukucabanga ukuthi akudingi ukunakekelwa
3 Ungakunaki ukuma kwentshebe
Ukuyigqoka mfushane kakhulu noma yinde kakhulu
Ukufushane kakhulu 'kwentshebe yezinsuku ezintathu' kungenza kubukeke sengathi awukasitholi isikhathi sokugunda ekuseni, kuyilapho isikhathi eside kakhulu kungaholela esimeni esingaluleki, ikakhulukazi emsebenzini.
Ngokuvamile, ubude obulungile bufinyelelwa ezinsukwini eziyi-3-4 ngemuva kokushefa. Noma uma uqaphela ukuthi, lapho uhambisa isandla sakho entshebeni yakho, izinwele sezivele zibheke ebusweni bakho, ngakho-ke, usuvele usishiyile emuva kwalesi sigaba sokuqala sokukhula esibonakala ngekhwalithi ebukhali, kube mnandi kwabashadikazi.
Ukucabanga ukuthi akudingi ukunakekelwa
'Intshebe yezinsuku ezintathu' ingenye yalezo ezidinga umsebenzi omncane kithina, noma ngabe singaphansi kwesondlo esiphansi, udinga ukuchitha imizuzu embalwa nsuku zonke. Lungisa isilevu sakho sisike ku-3-4mm bese usilayida phezu kwentshebe yonke kuze kube yilapho kutholakala umphumela ofanayo. Bese, susa isivikeli noma usebenzise insingo ukuhlanza intamo (ngezansi nje kwamantongomane) bese ususa noma yiziphi izinwele ezixegayo ezihlathini.
Ungakunaki ukuma kwentshebe
Ukuvumelanisa ukwakheka kwentshebe nobuso bakho kuzokuvumela ukuthi uvumelanise izici zakho. Ulayini wesihlathi ungenza ubuso bakho buvele bube bude noma bube yindilinga kuya ngesikhundla sakho. Uma unobuso obude, cabanga ukugcina lowo mugqa uphakeme ngangokunokwenzeka. Ngobuso obuyindilinga, ngakolunye uhlangothi, womabili umugqa ophansi wesihlathi nomugqa womhlathi ongezansi usebenza kangcono, owokugcina uqaphele ukuthi angangeni endaweni yentamo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Intshebe Yezinsuku Ezintathu - Amaphutha Okufanele Uwagweme
Amakha aqabulayo kuleli hlobo